YouTube hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ciyaarto fiidiyowyada 4K xitaa haddii shaashadda aan la taageerin Androidsis
Ignacio Sala | | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Codsiga YouTube-ka ee loogu talagalay Android ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay si loo siiyo isticmaaleha suurtagalnimada in lagu ciyaaro fiidiyowyo laga heli karo mashiinka tayada 4K, xitaa haddii shaashadda taleefanka casriga ah ama kiniinku aanu is-waafaqsanayn, sababta ay Google u hirgelisay doorashadan lama yaqaan laakiin, haddii aanu khalad ahayn, waqti kadib ayaan ogaan doonnaa sababta.
Dabcan, si loogu ciyaaro fiidiyowyada tayada 4K, waxaa lagugula talinayaa in taleefannadeenna casriga ahi ay ku xirmaan iskuxirka Wi-Fi haddii aanan dooneynin in xaddiga xogteennu ku baaba'o fiidiyowyo kooban. Suurtagalnimada daawashada fiidiyowyada ee tayada 4K waxaa kaliya lagu heli karaa fiidiyowyo la soo galiyay barxadda qaraarkan iyo xulashooyinka ma muujinayo 2160p60 inay tahay xallinta ugu badan.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah isticmaaleyaasha Reddit, sababta ay Google ugu dartay doorashadan maahan qalad, laakiin waxay ahayd tallaabo ula kac ah oo lagu hagaajinayo tayada fiidiyowyada shaashadda leh qaraarro hoose.
Adoo awood u siinaya ikhtiyaarrada xallinta fiidiyowga ee aan la taageerin aaladaha leh soo bandhigyo qaraar hoose, fiidiyowyadu waxay ka tayo sarreeyaan marka lagu ciyaarayo qaraarka la taageero.
Shakhsi ahaan, waxaan tijaabiyey fiidiyow tayo leh oo 1080K ah oo leh Pixel XL oo leh shaashadda 4p tanina waxay umuuqataa inay sifiican u muuqato markii lagu ciyaarayo 2160p60. Tani waa sababta oo ah fiidiyowyada xallinta sare waxay leeyihiin heer xoogaa sarreeya iyo riixitaan hoose.
Faa'iido kale oo ah in lagu ciyaaro fiidiyowyo 4k qaraarka shaashadda aan la taageerin waa kororka fiiqnaanta, maxaa yeelay ma jiraan wax fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah, sidaas darteed natiijada ayaa aad uga wanaagsan. Adigoon xusin isbadalkan kujira qoraalada cusbooneysiinta ee ugu dambeeyay, Google waxay u badan tahay inay ku hawlgalisay garaacida badalka dhanka server-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » YouTube hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ciyaarto fiidiyowyo 4K ah xitaa haddii shaashadda aan la taageerin
Sida loo beddelo cabbirka xarfaha ku jira Google Chrome